के श्रीदेवी पुत्री प्रेममा छिन् ? जान्ह्वीको काखमा बस्ने युवा को हुन् ? – mero sathi tv
के श्रीदेवी पुत्री प्रेममा छिन् ? जान्ह्वीको काखमा बस्ने युवा को हुन् ?
On १८ चैत्र २०७४, आईतवार १०:३०
बलिउड शोकमग्न पारेर अचानक अभिनेत्री श्रीदेवीले संसारबाट बिदा भईन् ।धेरै फ्यानहरु उनको मृत्यु पछि उनकी छोरी जान्ह्वी कपूरको फिल्म ईन्डस्ट्रीमा प्रवेश हुँदै गरेको र उनको अपकमिङे फिल्म ‘धडक’ को ब्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।ईशान खट्टर र जान्ह्वी कपूरको मूख्य अभिनय रहेको फिल्म ‘धडक’ हाल शुटींगको क्रममा छ जुन ६ जुलाईमा रिलिज हुँदैछ ।
यही बीचमा एउटा तस्बिर निकै भाइरल भइरहेको छ जुन शुटींगको सेटबाट लिक भएको हो ।तस्बिरमा ईशान जान्ह्वीको काखमा बसेका छन् ।तस्बिरमा उनीहरु दुवै जना एकदम खुशी देखिन्छन् जान्ह्वीले ईशानलाई पाएर कतै आमा गुमाएको पिडा भुल्ने प्रयास त गरेकी होईनन् भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ ।
केही समय अगाडि इशान र जान्ह्वी प्रेममा रहेको खबर फैलिएको थियो । यद्यपि यसको पुष्टि हुन सकेको थिएन । तर, यो तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनीहरुबीच पक्कै अफेयर छ भनेर अड्कल गर्न सकिन्छ । एउटा अर्को तस्बिरमा जान्ह्वीले ईशानको कपाल स्याहारिरहेको देखिन्छिन् ।
ल्वाङको सेवन गरी यी रोग भगाउनुस्